Ahoana ny fitsapana ny maripana mahandro miadana - Torohevitra Sy Hevi-Dehibe!
fomba fahandro ho an'ny bacon mifono setroka kely misy siramamy mena sy dibera
Ny epinara vaovao 1 kapoaka dia mitovy amin'ny hatsiaka be
mandra-pahoviana ianao no mahandro kitapo pizza
Ahoana ny fitsapana ny maripana mahandro miadana
Ahoana ny fitsapana ny mari-pana mahandro matevina anao.
ny fomba fanamboarana fitoeram-paty
Raha tsikaritranao fa tsy mahomby tsara ny fomba fahandro mahandro anao na raha efa ela kokoa noho ny fomba fahitan'ny renibenao dia mety tonga ny fotoana hitsapana azy. Ny mpahandro miadana dia mila mihazakazaka amin'ny mari-pana mety tsara mba hiantohana ny fiarovana ny sakafo sy ny fandrahoan-tsakafo mety.
Apetaho amin'ny BOARD COOKER MORA anao ity mba HAMONJY azy sy hizara azy!
Araho Mandany vola amin'ny Pennies amin'ny Pinterest ho an'ny fomba fahandro tsara kokoa!
aiza no ahafahako mividy saosy mamy sy marikivy
Na dia mahandro tsy mahomby aza ny fahandroana tsy dia miasa tsara, dia mety hampidi-doza koa izany amin'ny resaka fiarovana ara-tsakafo.
ny mahandro miadana tokony hanana mari-pana ambany ampy izay tsy mila hikarakaranao azy na izany aza ny mari-pana koa mila avo lenta mba hitazomana ny sakafo amin'ny mari-pana azo antoka. Ity fifandanjana marefo ity no mahatonga ny vilany crock ho fitaovana ankafizin'ny tsirairay amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny dips ka hatramin'ny roasts.
Ny fahafantarana fa miasa ny mpahandro anao miadana dia zava-dehibe. Raha efa elabe ny vilaninao vilany, dia mety ho masaka miadana izy, ka mamela bakteria miforona na eo am-pisakafoanao. Ny mahandro anao miadana dia tokony hanafana ny sakafo farafaharatsiny 140 degre ao anatin'ny fe-potoana efatra. Te hizaha toetra ny anao ianao hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fenitra fiarovana amin'izao fotoana izao mba hitazomana ny sakafo hohaninao (ary hiantohana tsara ny sakafo hohaninao).
Ahoana ny fitsapana ny Cooker Slow-nao
Fenoy rano antsasaky ny tampony ny fahandro masaka anao.
Ampodio amin'ny toerana ambany indrindra izy io ary afeno mandritra ny 8 ora.
Esory ny sarom-bilany ary raiso avy hatrany ny mari-pana amin'ny rano.
Ny maripanan'ny rano dia tokony 185 degre F.
mitsimoka any Bruxelles miaraka amin'ny bacon sy tongolo
Raha avo kokoa ny mari-pana amin'ny rano dia tsy raharaha lehibe izany. Mety hahenao ny fotoana fandrahoan-tsakafo ho an'ny lovia sasany. Azonao atao koa ny mividy ny iray amin'ireo fonosana madinidinika izay hanidy ho azy ny milina anao raha vantany vao tonga amin'ny fotoana mety ny sakafo. Saingy, na izany na tsy izany, tsy ilaina ny manipy ny vilaninao.
Raha latsaky ny 185 ny mari-pana , na izany aza, tokony hieritreritra am-pahatsorana ny fanariana ny appliance ianao. Ny mpahandro miadana amin'ny ambany dia tokony ho 200 degre raha 300 degre ny toerana avo.
Eo anelanelan'ny 40-140 degre F no 'faritra mampidi-doza' ao anaty vilia fihinanao. Ny bakteria dia hitombo haingana sy mora amin'ny sakafonao raha mijanona ao amin'io elanelana io lava loatra izy. Mazava ho azy fa handany fotoana amin'izany mari-pana izany ny sakafonao, na inona na inona, fa raha mahandro miadana kokoa ny sakafo ny mahandro anao dia mamorona tany fiompiana ho an'ny yucky ianao.
Tandremo mba ho salama sy ho salama ny ankohonanao amin'ny fanaraha-maso ny fahandro masakao sy ny fifantohanao. Mety hanavotra anao amin'ny aretina, na sakafo hariva ratsy fotsiny.
Mitadiava fomba fahandro mahandro moramora eto.
Ny mahandro miadana tiako indrindra:
Hamilton Beach nametraka ‘n hadino Programmable Slow Cooker Miaraka amin'ny Temperature Probe, 6-Quart. Nampiasako ity fandrahoana masaka ity nandritra ny 10 taona teo ho eo ho an'ny sakafom-pianakaviana tsy tambo isaina. Na dia tiako ilay mahandro miadana aza izy dia tsy nampiasa matetika ilay famotopotorana.
izany Black & Decker mahandro masaka dia tsara ho an'ny ankohonana lehibe (7QT) na dia manana teboka vidiny mahatalanjona sy famerenana tsara aza.
Raha mitady mpahandro miadana 4QT kely kokoa ianao, ny Hamilton Beach Mijanona na Mandehana Cooker miadana 4QT manana famerenana tsara ary mora vidy ihany ary Crock Pot dia manana zavatra tsara 4-Quart Smart-Pot Digital Slow Cooker .
Ary mazava ho azy fa raha eny an-tsena ianao amin'ny fampiasana fitaovana marobe ampiasaina, dia azonao atao ny mandinika an Vilany Instant izay mahandro miadana, mahandro tsindry, mpanao yaorta, etona ary maro hafa ao anaty iray.
Sary © dansamy / 123RF Stock Photo 'target =' _ blank 'rel =' nofollow noopener noreferrer '> Amy Muschik Loharano: Serivisy fiarovana sy sakafo fanaraha-maso,Departemantan'ny fambolena any Etazonia Fanitarana ny kooperativa an'ny oniversite ao Iowa University of Wyoming Sakafo ara-tsakafo sy fiarovana ara-tsakafo.